Nzira dzakasiyana dzekumisikidza Default MailTo App pa Windows 10
Chii chinonzi default mail app chinoita? Iyo inovhura iyo mail app chero iwe paunodzvanya pane tsamba-kuemail link pawebhu peji. Kunze kwebhokisi, iyo default mail app ndeyeMail app inouya nayo Windows 10. Asi kana iwe uri kushandisa Microsoft Outlook, iwe unoda kushandura iyo default mail app kuAptlook, panzvimbo peMail app iyo isina kumbogadzirirwa yako email account.
Nhanho yacho iri nyore. Dzvanya Start uye neiyo giya icon kuvhura iyo Zvirongwa app, enda kuApplication uye Default maapplication, uye woisa Outlook seiyo Email default app ipapo.
Zvinoramba zvakadaro kusvika nguva inotevera yako Windows 10 inowana imwe hombe ficha yekuvandudza. Ipapo, iwe uchafanirwa kuzviita zvakare zvakare.
Zvinogona kunetsa uye kunetesa kana iwe uchikwanisa mazana emakomputa. Kuitwa kweGwara rePolisi kungave kuri nyore.
Kutanga, tumira kunze kwazvino kushamwaridzana kwesoftware kune XML faira. Mhanya unotevera kuraira mune yakakwidziridzwa yekuraira Prompt hwindo.
DISM / Online / Export-DefaultAppAssociations:"d:AppAssociations.xml "
Kuti uve nechokwadi chekuti Outlook ndiyo default mail app yekuvhura tsamba-kune zvinongedzo, tarisa uye uone kana iwe uchigona kuwana mutsetse senge pazasi muXML faira iwe waunotumira kunze.
Zvadaro, vhura Gamba Policy Editor, enda kune zvinotevera
Kugadziridzwa kweComputer> Mahofisi Ekutungamira> Windows Zvikamu> Faira Explorer
Uye tinya kaviri iyo Gadza default masangano ekumisikidza faira policy uye woisa iyo kuti Gonesa, iine nzira inoenda kuapp association association XML faira iwe uchangotumira kunze.
Izvo zvinofanirwa kuzviita. Iyo default app kushamwaridzana ichaitika nguva inotevera kana mushandisi apinda zvakare.
Kana Group Policy iri kunze kwemubvunzo, uyu mutsetse wekuraira inofanira kunge iri inotevera sarudzo yekuyedza.
SetUserFTA.exe mailto Outlook.URL.mailto.15
Isa rairo yekuraira mune yekunyorera script uye mese maiswa.
The post Nzira dzakasiyana dzekumisikidza Default MailTo App pa Windows 10 yakatanga kutanga Inotevera ya Windows.
How To Wedzera Gmail To Windows 10 tsamba
Iyo 9 Yakanakisa Yemahara Eakaundi Akaundi uye Vashandi Vanopa e2020
Yekupedzisira Nongedzo kune Email Kushambadzira
Maitiro ekumisikidza uye kutanga kushandisa Mail yeMac
Zvakakosha kuraira maturusi ekugadzirisa chero chero netiweki nyaya pa Windows 10
Windows Explorer Anoshandiswa neMailto Rudzikunuro kunzvenga Kuonekwa
23 yeakanakisisa Email Newsletter Matemplate uye Zviwanikwa kuti Utore Nazvino